Maleeshiyada Al-Shabaab oo isaga baxay magaalada Ceel-waaq oo ay shalay qabsadeen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo isaga baxay magaalada Ceel-waaq oo ay shalay qabsadeen
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab oo shalay galab oo Jimce ahayd qabsatay magaalada Ceel-waaq oo kutaala xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ayaa xalay oo Sabti ahayd isaga baxday halkaas, sida ay sheegayaan wararka.
Maleeshiyada oo magaalada shalay galab ilaa xalay haysatay ayaa ka baxday kadib markii ay ogaadeen in ay ciidamo kusoo fool leeyihiin katirsan kuwa AMISOM iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya.
Ceel-waaq ayaa ah magaalo istiraatiiji ah waxayna wado weyn u tahay ciidamada Kenya ee howgalada kawada koonfurta galbeed ee Soomaaliya.
September 21, 2016 Banaanbax looga soo horjeedo sheegashada Kenya ee qayb kamid ah badda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay
Xildhibaan katirsan golaha deegaanka Gaalkacyo oo magaalada Gaalkacyo lagu dilay
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Niman hubaysan oo aan la karanayn ayaa toogasho ku dilay xubin katirsan golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee Puntland. Sarkaal boooliis ah, kaasoo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa warsidaha Puntland Mirror u [...]